Gumiin mirga namaa kaleessa gara galgalaa marsariitii irratti barreeffama maxxanseen ibsi kun koreen hoji raawwachiistuu paartii biyya bulchu IHADEG ibsa inni baase irratti hundaa’uu dhaan ibsa gumii mirga namaa dhimmootii yeroo ilaalchisuun kenname.
Hidhamtoota yaada sammuu fi siyaasaa hiikuuf akkasumas waggoota 40 oliif waaltaa qorannoo Maa’ikelaawwii kan lammiiwwan lammiiwwan keessatti dararamaa turan cufuuf kaka’umsi mootummaan godhe jajjabaachuu akka qabu amantii isaa ta’uu gumichi beeksiseera.
Itti fufuu dhaanis mootummaan loogii fi ilaalcha siyaasaa tokko malee hidhamtoota siyaasaa fi yaada sammuu mara walaba gochuun murannoo dimokraasii fi walii galtee biyyoolessaaf qabu akka mirkaneessu gaafatee jira.
Keessumaa ragaa Maa’ikelaawwii of harkaa qabu tuquu dhaan yakki suukaneessaan waaltaa keessatti raawwatamaa turee fi raawwatamaa jiru ta’uu ibseera.
Ibsi kun akka jedhutti iyyannaa yeroo yerootti isa ga’u irratti hundaa’uun qorannaa geggeesse adeemsa mana murtii ilaalchisee ba’ii qorannaa argateen mana hidhaa Maa’ikelaawwii keessatti dararaa hamaan raawwachuu isaaf lammiiwwan qaama hi’achuu, miidhaa yaada sammuu fayyuu hin dandeenye darbees kan keessatti du’an ta’uu hubachuun danda’ameera.
Ibsi sun gara jabinaan dararaan kan raawwatamu Maa’ikelaawwii keessatti qofaa utuu hin taane buufataalee poolisii Federaalaa fi ka naannoo mana hidhaa hidhamtoonni yeroof keessatti hidhaman kan dabalatu ta’uu ibsee jira.
Qorattoonni waaltaalee keessatti gocha suukaneessaa kana raawwataa turanis murtiitti akka dhiyaatan gaafata.